सपनामा विवाह भएको देख्नुभयो भने के हुन्छ ? – Suchana Hub
सपनामा विवाह भएको देख्नुभयो भने के हुन्छ ?
काठमाण्डौ । ज्योतिषीय शास्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिले देखेको सपनाले पूर्वसूचना शुभ अ*शुभ अनि मिश्रित फल दिने बताइएको छ । सपना हाम्रो अधिनमा हुँदैन । त्यसैले कहिले हामी सपनामा के देख्छौँ भनेर पनि हामीलाई थाहा नै हुँदैन । त्यस्तै सपनामा देखिएका कुराहरुका अर्थ के हो भन्ने बारेमा जानेका हुँदैनौँ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
स्वप्न शास्त्रका अनुसार सपनामा विवाह भएको देख्नु एकदमै अशुभ मानिएको छ । यदि तपाईले सपनामा परिवारका कसैको विवाह भएको देख्नुभएको छ भने त्यो सपना अत्यन्तै अशुभ मानिन्छ । विवाह हुनु शुभ भएपनि पनि सपनामा विवाह हुनु भनेको अशुभ मानिएको छ । सपनामा दुलहा दुलहीले म* ण्डप घुमीरहेको देख्नुलाई त झनै सबैभन्दा नराम्रो सपना मानिएको छ । यदि तपाईले सपनामा विवाहको औँठी देख्नुभयो वा बेहुलाले बेहुलीलाई औंठी लगाईदिएको देख्दा पनि त्यसले नराम्रो फल दिने गर्दछ ।
Previous बिहीबार पूजिने दुर्गा भगवतीको अंश बंगलामुखीको अपरम महिमा।
Next आज बिहिबार, यसरी रिझाउनुहोस वृहस्पतिलाई :